Izindaba - Odinga Ukukwazi Ngezinhlobonhlobo
I-Omicron Variant: Okufanele Ukwazi
Ulwazi mayelana nezinhlobonhlobo: Amagciwane ahlala eshintsha ngokuguqulwa kwezakhi zofuzo futhi ngezinye izikhathi lezi zinguquko ziholela ekwahlukeni okusha kwegciwane.Ezinye izinhlobo ziyavela futhi zinyamalale kuyilapho ezinye ziphikelela.Okuhlukile okusha kuzoqhubeka nokuvela.I-CDC nezinye izinhlangano zezempilo zomphakathi ziqapha zonke izinhlobo zegciwane elibangela i-COVID-19 e-United States nasemhlabeni jikelele.
Okuhlukile kwe-Delta kubangela izifo eziningi futhi kusakazeka ngokushesha kunohlobo lwangempela lwe-SARS-CoV-2 lwegciwane elibangela i-COVID-19.Imithi yokugoma ihlala iyindlela engcono kakhulu yokunciphisa ubungozi bakho bokugula kakhulu, ukulaliswa esibhedlela, kanye nokufa okuvela ku-COVID-19.
Izinto Eziphezulu Okufanele Uzazi
1.Izinhlobo ezintsha zegciwane kulindeleke ukuthi zenzeke.Ukuthatha izinyathelo zokunciphisa ukusabalala kokutheleleka, okuhlanganisa nokuthola umuthi wokugomela i-COVID-19, kuyindlela engcono kakhulu yokunciphisa ukuvela kwezinhlobonhlobo ezintsha.
2.Imithi yokugoma inciphisa ubungozi bakho bokugula kakhulu, ukulaliswa esibhedlela, kanye nokufa ngenxa ye-COVID-19.
Imithamo ekhuthazayo ye-3.COVID-19 iyanconywa kubantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu.Intsha eneminyaka engu-16-17 ubudala eyathola imigomo ye-Pfizer-BioNTech COVID-19 ingathola umthamo okhuthazayo uma okungenani inezinyanga eziyisi-6 ithumele uchungechunge lwayo lokuqala lokugoma lwe-Pfizer-BioNTech.
Nakuba imithi yokugoma inciphisa ubungozi bakho bokugula okunzima, ukulaliswa esibhedlela, kanye nokufa okuvela ku-COVID-19, okwamanje asikazi ukuthi izosebenza ngempumelelo kangakanani ekubhekaneni nezinhlobonhlobo ezintsha ezingase zivele, okuhlanganisa ne-Omicron.
isithonjana sokukhanya kwegciwane lamaphaphu
Konke okuhlukile kwangaphambilini kubangela izimpawu ezifanayo ze-COVID-19.
Okunye okuhlukile, okufana nokuhluka kwe-Alpha ne-Delta, kungase kubangele ukugula okubi kakhulu nokufa.
Isithonjana sokukhanya semaski sekhanda ohlangothini
Ukugqoka imaskhi kuyindlela ephumelelayo yokunciphisa ukusabalala kwezinhlobo zangaphambili zegciwane, okuhlukile kwe-Delta nezinye izinhlobo ezaziwayo.
Abantu abangagonyiwe ngokuphelele kufanele bathathe izinyathelo zokuzivikela, okuhlanganisa nokugqoka imaskhi endlini esidlangalaleni kuwo wonke amazinga okudluliselwa komphakathi.
Abantu abagonywe ngokugcwele kufanele bagqoke imaski besendlini ezindaweni ezinokutheleleka okukhulu noma okuphezulu.
Ukugqoka imaski kubaluleke kakhulu uma wena noma othile ekhaya lakho
Unamasosha omzimba abuthakathaka
Unesimo sezempilo esicashile
Ingabe umuntu omdala omdala
Ukuhlolwa kwe-SARS-CoV-2 kukutshela ukuthi unalo yini ukutheleleka ngesikhathi sokuhlolwa.Lolu hlobo lokuhlola lubizwa ngokuthi “igciwane” ngoba lubheka ukutheleleka ngegciwane.I-Antigen noma i-Nucleic Acid Amplification Test (NAATs) ukuhlolwa kwegciwane.
Ukuhlolwa okwengeziwe kuzodingeka ukuze kutholwe ukuthi iluphi uhlobo olubangele ukutheleleka kwakho, kodwa lokhu ngokuvamile akugunyaziwe ukuze kusetshenziswe isiguli.
Njengoba kuvela okuhlukile okusha, ososayensi bazoqhubeka nokuhlola ukuthi izivivinyo zithola kahle kangakanani ukutheleleka kwamanje.
Ukuzihlola kungase kusetshenziswe uma unezimpawu ze-COVID-19 noma uke wadalulwa noma okungenzeka ukuthi uvelelwe umuntu one-COVID-19.
Ngisho noma ungenazo izimpawu futhi ungakaze uvezwe kumuntu one-COVID-19, ukusebenzisa ukuzihlola ngaphambi kokubuthana endlini nabanye kungakunikeza ulwazi ngengozi yokusabalalisa igciwane elibangela i-COVID-19.
Ososayensi baqapha zonke izinhlobo kodwa bangase bahlukanise okuthile njengokuhlukile okugadwayo, okuhlukile kwentshisakalo, okuhlukile kokukhathazeka nokuhlukahluka kwemiphumela ephezulu.Okunye okuhlukile kusabalala kalula futhi ngokushesha kunezinye izinhlobo, okungase kuholele ezimweni eziningi ze-COVID-19.Ukwenyuka kwenani lamacala kuzofaka ubunzima obuningi ezinsizeni zokunakekelwa kwempilo, kuholele ekulalisweni okwengeziwe, kanye nokufa kwabantu abaningi.
Lezi zigaba zisuselwe ekutheni ukwahluka kusabalala kalula kangakanani, ukuthi izimpawu zinzima kangakanani, ukuthi okuhlukile kusabela kanjani ekwelashweni, nokuthi imithi yokugoma ivikela kahle kangakanani kokuhlukile.
I-Omicron - B.1.1.529
Okokuqala kukhonjwe: iNingizimu Afrika
Ukusabalala: Kungase kusakazeke kalula kunezinye izinhlobo, kuhlanganise ne-Delta.
Ukugula nokufa okunzima: Ngenxa yenani elincane lamacala, ubukhali bamanje bokugula nokufa okuhlotshaniswa nalokhu kuhluka akucacile.
Umgomo: Ukutheleleka okuqhamukayo kubantu abagonywe ngokugcwele kulindeleke, kodwa imigomo iyasebenza ekuvimbeleni ukugula okunzima, ukulaliswa esibhedlela, nokufa.Ubufakazi bakuqala buphakamisa ukuthi abantu abagonywe ngokugcwele abatheleleka ngokuhlukile kwe-Omicron bangasakaza leli gciwane kwabanye.Yonke imithi yokugoma egunyazwe yi-FDA noma egunyaziwe kulindeleke ukuthi isebenze ekuguleni okunzima, ukulaliswa esibhedlela, nokufa.Ukuvela kwakamuva kokuhluka kwe-Omicron kugcizelela nakakhulu ukubaluleka kokugoma kanye nama-booster.
Ukwelashwa: Ezinye zokwelapha i-monoclonal antibody zingase zingasebenzi kahle ngokumelene nokutheleleka nge-Omicron.
I-Delta - B.1.617.2
Okokuqala kukhonjwe: India
Ukusabalala: Kusabalala kalula kunezinye izinhlobo.
Ukugula nokufa okunzima: Kungabangela izimo ezimbi kakhulu kunezinye izinhlobo
Umgomo: Ukutheleleka okuqhamukayo kubantu abagonywe ngokugcwele kulindeleke, kodwa imigomo iyasebenza ekuvimbeleni ukugula okunzima, ukulaliswa esibhedlela, nokufa.Ubufakazi bokuqala buphakamisa ukuthi abantu abagonywe ngokugcwele abangenwa uhlobo lwe-Delta bangasakaza leli gciwane kwabanye.Yonke imithi yokugoma egunyazwe yi-FDA noma egunyaziwe iyasebenza ekuguleni okunzima, ukulaliswa esibhedlela, nokufa.
Ukwelashwa: Cishe zonke izinhlobo ezijikelezayo e-United States zisabela ekwelashweni okugunyazwe yi-FDA-nokwelashwa kwe-monoclonal antibody.